Waxay jira waqtiyo aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan files ka iPhone in PC ah oo ay u badan tahay in aad ku xayiran on helo xalka ugu habboon in ay fuliyaan. Ha noqoto wareejinta music, waraaqaha, videos, sawiro, ama file kasta, qof kasta uu aado qalab ah oo bixiya xog iyo hufnaan. Qaybaha soo socda ee qoraalkan waxa aad qaadan doonta iyada oo xal in laga dhawaajiyo doonaa si xushmad maanka ay xasilloonaan ku shaqeynayaan iyo in la eego wareejinta music aad jeceshahay ka PC ah in aad iPhone.
Mid ka mid ah qalabka hubaal xallin doonaan mushkiladda idiin yahay TunesGo wondershare. Wondershare TunesGo waa in ay bixisaa dadka isticmaala iPhone tiro balaadhan oo ah adeegyo in domain wareejinta file boosteejo ah oo cross. Tani software kala iibsiga oo dhan ka mid ah faylka loo yaqaan in ay miday aad ee bixinta adeegyada iyo waafaqsan yahay macruufka qalabka-Ma la socon karaa xataa qalabka macruufka dambeeyay. Sidaas sidee ayaad u isticmaali software si ka computer shakhsi wareejiyo music inay iPhone ah?
Isticmaalka TunesGo Wondershare si ay u gudbiyaan Music kombiyuutar si ay Iphone
Waxaa jira laba hab oo aad dooran kartaa ka iyo shaqaaleeyaan ay dhacdo in aad rabto in aad wareejiso files music kuwa waad waalan ku saabsan. Labada fursadaha jira oo TunesGo isticmaali karto si ay u gudbiyaan files music aad.
Kala beddelashada Music ka Lugood in Device
Kala beddelashada Music ka PC si toos ah Device
Music Transfer ka Lugood si iPhone Isticmaalka Wondershare TuneGo
Doorashadan waxa ugu fiican oo taam u ah kuwa dooni si aad u hesho a playlist siiyo Lugood in qalab. Si aad u wareejin music qalab iPhone adiga oo isticmaalaya Doorashadan, waxaad u baahan doontaa in labada Lugood iyo TunesGo Wondershare rakibay your computer. Waxaad riix kartaa badhamada Download hoose si aad u dejisan version tijaabo ah Wondershare TunesGo ah.
Dooro OS aad markaas isticmaalaya download it. Software waa lacag la'aan si ay isugu dayaan laakiin waxaad u baahan doontaa si aad u soo iibsato si aad u hesho hawlaha buuxa. Waxaa lagu talinayaa in aad soo iibsato hadii aad raadinayso in la isticmaalo software ah in badan oo hawlaha kala iibsiga file. Ka dib markii la rakibey, gashato in aad computer oo aan bilowno ka qaybta codsiyada. Connect aad iPhone in computer oo isticmaalaya cable USB ah. Hubi in iPhone waxa lagu ogaan karaa ka-kaliya PC si loo hubiyo in cable USB si fiican u shaqeeya. Marka bilaabay iyo telefoonka la ogaado, waxaad ka heli doontaa interface ah oo muujinaya magaca aad telefoonka ee.
Riix Music Transfer iyo guji Import in menu sare ee interface ka muuqata. Tani waxay ku siin doonaan hoos u dhac ku hoos menu oo waa in aad doorato dejinta ka Lugood .
Dooro playlist la doonayo aad rabto in lagu wareejiyo ka Lugood in aad qalab-by click si aad u hubiso sanduuqyada ku xiga si playlists. Finish adigoo gujinaya OK .
Bedelka Music From PC si toos ah Device
Fursada xigta ee aad u isticmaali karto waa in si toos ah loogu wareejiyo music ka computer ah in qalab iPhone ah si toos ah. Si taas loo gaaro, waxaad u baahan doontaa inay dhidibbada u aasto TunesGo Wondershare sida ku cad qaybaha hore ee qoraalkan. Sidoo kale, waxaad u baahan doontaa in aan bilowno codsiga iyo xiriiriyaan iPhone in PC isticmaalaya cable USB ah. Marka software la bilaabay iyo qalab si fiican ku xiran, waa in aad awood u leedahay magaca aad telefoon u arkaan in interface guriga noqon. Qeybta hoose ee sawir telefoonka, guji Music Transfer ku xiga click ku Import . On hoos u soo dhaadhacay menu oo muujinaysa kor, guji Import ka PC / Mac .
Dooro files music aad raadinayso si ay u gudbiyaan via Explorer File daaqadaha ah. Marka aad ka dhigay doorashooyinka midig, riix OK iyo files ay bilaabi doonaan is laga soo wareejiyay PC ay u qalab iPhone aad.
Features kale ee aad ka heli kartid TunesGo Wondershare
Marka laga reebo xaqiiqada ah in TunesGo ha idin ​​music ka PC wareejiyo qalabka iyo qeybsanaan ku xigeenka, software ayaa sidoo kale cadayn doono muhiim ah in aad la siinayo adeegyo kale oo laga cabsado. Software ayaa sidoo kale oggolaan doono in aad ka Youtube download music si toos ah maktabadda Lugood aad galay halka diyaarinta files music aad tags isticmaalaya. Software ayaa sidoo kale waa ku weyn yahay gacan heshiis file music siiyo in ay si toos ah u nadiifin kartaa maktabadda. Waxa kale oo ay ogolaan kartaa in aad si aad u sameysato files music hab oo qanciya dhadhankii iyo doorashaada. Waxaa intaa dheer, qalab ayaa dawaarle ka dhigay in ay is ogow wanaagsan ee waafaqsan arrimaha soo bixi kara ka files aqlka in qalabka iyo Lugood. Sidaas, waxaad badbaadin isdhibin ee ordaya galay files music aan lagu ciyaari karin. Wax qabow kale oo aad samayn kartaa TunesGo waa la wadaago playlists ilaa iyo kanaalada warbaahinta bulshada jecel. Waxaynu wada ognahay in warbaahinta bulshada uu la wareegay caalamka iyo tunesGo ay hubisaa in aad ku raaxaysato music asxaabta iyo qoyska iyada oo Facebook, Twitter iyo kuwo kale.
Marka la eego fudud, TunesGo yahay xalka ugu wanaagsan ee ma aha oo kaliya lagu wareejiyo files music ka PC qalabka iPhone, laakiinse inuu u gaaraan soo diyaariyeen balaadhan oo ah waxyaabo kale. Kala hadal waxyaabaha ku saabsan in ay ka qiimo lacag iyo Wondershare TuneGo sida xaqiiqada ah waa in liiska!
> Resource > iPhone > Xalka ugu fudud si ay u gudbiyaan Music ka Computer si ay iPhone